गोठाला गएको समयमा बाघले घेरपछि रुख चढेर ज्यान जोगियो, हात्ति प्रयोग गरि उद्धार – Dainik Sangalo
गोठाला गएको समयमा बाघले घेरपछि रुख चढेर ज्यान जोगियो, हात्ति प्रयोग गरि उद्धार
प्रकाशित मिति: शनिबार, आश्विन १६, २०७८ समय: १८:२६:४९
बाँके, असोज १६। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर– १ गाभरमा बाघले घेरिएका ३ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ । गाभर निवासी अन्दाजी ५६ बर्षका सेतु ओली, २५ बर्षीया हिरा खड्का र २४ बर्षीया कालिका खड्कालाई निकुञ्जका हात्ती प्रयोग गरि सकुशल उद्धार गरिएको हो ।
भैंसी र बाख्रा चराउन वनमा गएको समयमा उहाँहरुलाई पूर्व-पश्चिम राजमार्गदेखि करिब एक किलोमिटर दक्षिण खर्चेताल नजिक ३ वटा बाघले घेरेका थिए । बाघले घेरेपछि रुखमा चढेर ३ जनाले ज्यान जोगाउनुभएको छ ।
बाघले घेरिरहेको अवस्थामा नजिकै चराउन लगिएका हात्तीलाई प्रयोग गरि माउतेले उद्धार गरेको स्थानीय टोपबहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो।
काठमाडौँ– के तपाईले घरमा विभिन्न सामान किनेर जम्मा भएको प्लाष्टिकको झोला जलाउने गर्नुभएको छ ? वा फोहर फाल्ने ठाउँमा फाल्ने गर्नुभएको छ ? यदि यसो गर्ने गर्नुभएको छ भने अब प्लाटिककै बोतलमा प्लाष्टिक कोचोर थुपार्नुहोस् पौसा पाइन्छ ।
प्लाष्टिकको बोतलमा फोहरका रूपमा फालिने प्लाष्टिक कोचेर भर्नुभयो भने अब त्यो पनि बिक्री हुने भएको छ । बोतलमा भरिएको प्लाष्टिक वाग्मती सफाइ अभियानकर्मी उत्तम पुडासैनीले व्यक्तिगत तवरबाट खरिद सुरु गरेका हुन् । खरिद गरिएको बोतल कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८ स्थित पशुपति क्षेत्र विकास कोषले उपलब्ध गराएको जग्गामा संरक्षित गाई बाच्छा संरक्षण स्थलमा बगैँचा र स्तम्भ निर्माणमा प्रयोग गरिने भएको छ ।
समितिले नै तीन महिनाअघि आयोजना गरेको फोहरमैला व्यवस्थापन तालिममा पुडासैनीले प्रमुख प्रशिक्षकका रुपमा प्रशिक्षण दिँदै प्लाष्टिकका झोला बोतलमा राखेर बगैँचा सजावट, स्तम्भ निर्माणलगायत काममा उपयोग गर्न सकिने भनी समुदायलाई प्रेरित गरेका थिए । घरको फोहर बाहिर फाल्नु पाखण्डताको पराकाष्ठा भएकाले महिला समितिलाई आफैँ व्यवस्थापन गर्न प्रेरित गरिएको थियो ।
विसं २०७० फागुन ३ देखि गुह्येश्वरीमाथि वाग्मती सफाइ अभियानको नेतृत्व गर्दै आएका उनले वाग्मती सुन्दरता सरोकार मञ्च गठन गरेर समुदायलाई सचेत गराउँदै आएका छन् । ‘मुहानदेखि नै वाग्मती सफा गरौँ’ भन्ने नाराका साथ गुह्येश्वरीमाथिको वाग्मती सफाइ भइरहेको छ । घरघरबाट निस्कने प्लाष्टिक अन्तिममा वाग्मतीमै गएर फोहर हुने भएकाले टोलमै व्यवस्थापनका लागि यस्तो अभियान चलाइएको अभियानकर्मी पुडासैनीले जनाए ।
नारायणटार मार्ग भनिने मडगालका महिलाले यो अभियानलाई निरन्तरता दिने भएका छन् । प्लाष्टिक कोचिएका बोतल निःशुल्क दिन चाहे पनि अभियानकर्मी पुडासैनीले मिहिनेतको फल दिएकाले त्यसमा थप गरेर गोठाटारस्थित गाई बाच्छा संरक्षण अभियानलाई हस्तान्तरण गरिने समितिका अध्यक्ष वसन्ती लामाले बताइन् । अभियानलाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि आजै अर्को एक धोक्रो बोतलमा भरिएका प्लाष्टिक समितिलाई प्राप्त भएको जनाइएको छ ।
मञ्चको नेतृत्वमा यस क्षेत्रको सफाइ अभियानको ४०७औँ हप्ताको कार्यक्रम शनिबार गोठाटार पुलमा सम्पन्न गरिएको छ । सफाइमा पनि नदी किनारमा भेटिएका प्लाष्टिकलाई बोतलमा राखेर सफाइ गरिएको थियो । यस क्षेत्रमा कुहिने फोहरलाई भने नदी किनारमै खाडल खनेर पुर्ने गरिएको छ । नकुहिने प्लाष्टिकलाई बोतलमा राख्न थालेपछि नदी किनार सफा देखिन थालेको छ ।
सफाइका क्रममा विगत हप्तामाभन्दा नदी किनारबाट अलि बढी फोहर उठेकोे समितिका सञ्चालक सदस्य डा माला खरेलले जानकारी दिइन् । विगत हप्ताभन्दा बढी फोहर उठेको देखिएपनि उठाउन बाँकी फोहर पनि छिटो व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकालाई अनुरोध गरिएको उनले टिप्पणी गरिन् ।
यसैगरी शनिबारै काठमाडौँ उपत्यकाका रुद्रमती, विष्णुम
Last Updated on: October 2nd, 2021 at 6:26 pm